AKHRISO:- Kuluumeysatada Kenya oo codsada in la mamnuuco kaluunka Soomaaliya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaAKHRISO:- Kuluumeysatada Kenya oo codsada in la mamnuuco kaluunka Soomaaliya
AKHRISO:- Kuluumeysatada Kenya oo codsada in la mamnuuco kaluunka Soomaaliya
06/11/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Muwaadin kamid ah Kalluumeysatada ku dhaqan kawntiga Lamu ee dalka Kenya ayaa qaba in madaxweyne Uhura Kenyatta uu joojiya kalluunka lagu iibiyo Kenya ee laga keeno Soomaaliya iyo Tanzaaniya.
Codsigan ayaa ka imaanayaa ku dhowaad 6,000 oo kalluumeysatada ku nool Kenya gaar ahaan deegaannada Kiunga iyo Ishakani oo ku yaalla xuduudda uu gobolka Lamu la wadaago dalka Soomaaliya.
Kalluumeysatadan ayaa sheegay in la joogo xiligii ay dowladda tallaabo ka qaadi laheyd iibka Kalluunka laga keeno wadamada deriska ee Soomaaliya iyo Tanzaaniya oo sida ay sheegeen weerar kusoo qaaday suuqyada dalka Kenya.
Guddoomiya Ururka iskaashatada Kalluumeysatada Kenya Maxamed Cali ayaa sheegay in weerarka ganacsi ee kaga yimid Ganacsatada dowladaha deriska uu suuq la’aan ku riday kalluumeysatada Kenya.
“Waxaa loo baahan yahay in la xadido lana yareeyo badeecada Ganacsatada Soomaaliya iyo Tanzaaniya ee alaabahooda usoo suuq geeya dalka Kenya” ayuu yiri Maxamed Cali.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bishii lasoo dhaafay mamnuucay kalluunka laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha.
DAAWO SAWIRO:- Munaasabad sagootin ah oo loo sameeyay ardey deeq waxbarasho ka heshay Itoobiya
SAWIRO:- Wasiirka waxbarashada XFS oo la kulmay madaxda hay’adda DFID